အိမ်ထောင်ရှင် ကိုကိုတွေတိုင်း ဒီနည်းတွေသုံး ဘာဆေးမှ ကူစရာမလိုဘူးနော်..။(ကျန်းမာရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖတ်ရှူပေးပါရန်) - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အိမ်ထောင်ရှင် ကိုကိုတွေတိုင်း ဒီနည်းတွေသုံး ဘာဆေးမှ ကူစရာမလိုဘူးနော်..။(ကျန်းမာရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖတ်ရှူပေးပါရန်)
အိမ်ထောင်ရှင် ကိုကိုတွေတိုင်း ဒီနည်းတွေသုံး ဘာဆေးမှ ကူစရာမလိုဘူးနော်..။(ကျန်းမာရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖတ်ရှူပေးပါရန်)
Apann Pyay 7:03 PM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ , ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
ဆေးဝါးမလိုဘဲ အမျိုးသား စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းမွန်စေမည့် နည်းများ ...!(ကျန်းမာရေး အမြင်ဖြင့်သာ ဖတ်ရှူပေးပါရန်)
အမျိုးသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်လာအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့် ဆေးဝါးမျိုးစုံ ရှိနေပေမယ့် ဆေးတွေကို မမှီဝဲချင်ဘူးဆိုရင် သဘာဝနည်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်လာစေမယ့်
အောက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာ ပေးသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းစေမည့် အာဟာရ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာနဲ့အတူ လိင်တံဆီကို သွေးစီးဆင်းမှု ကောင်းစေမယ့် အစားအစာတချို့ကို တွဲဖက်စားပေးပါ။ အဲဒီအစာတွေကတော့-
ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီ - ခံတွင်း အနံ့အတွက် သိပ်မကောင်းလှပေမယ့် သွေးလှည့်ပတ်မှု စနစ်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစာနှစ်မျိုးပါ။
ငှက်ပျောသီး - ပိုတက်စီယမ်များစွာပါတဲ့ ငှက်ပျောသီးဟာ သွေးဖိအားကို ကျစေပြီး လိင်မှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ငရုတ်သီးနှင့် ငရုတ်ကောင်း - သဘာဝ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တွေဟာ သွေးတိုးနဲ့ ရောင်ရမ်းမှု လျော့ ကျစေကာ သွေးလှည့်ပတ် စီးဆင်းမှုကို ကောင်းစေပါတယ်။
အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေမည့် ဖြည့်စွက်ဓာတ်များ
အမျိုးသားအင်္ဂါ သန်စွမ်းကျန်းမာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးမယ့် ဖြည့်စွက်ဓာတ်တွေ ရှိပါတယ်။
အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်စစ် - ဆယ်လ်မွန်ငါးနဲ့ တူနာငါးတွေမှာ တွေ့ရသလို ထောပတ်သီးနဲ့ သံလွင်ဆီထဲ မှာပါတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဟာ သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဗီတာမင် B1 - ဒီဗီတာမင်က နာ့ဗ်ကြောစနစ်ကို ပိုမြန်မြန် လှုပ်ရှားစေပြီး ဦးနှောက်ကနေ လိင်တံဆီကို အချက်ပြမှု မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ဒီဗီတာမင် ပါဝင်တဲ့ အစာတွေက အဆီနည်းတဲ့ ဝက်သား၊ မြေပဲနီ ပဲနီစေ့တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဥအမျိုးမျိုး - ဗီတာမင်ဘီ အုပ်စုများစွာပါတဲ့ ဥအမျိုးမျိုးဟာ ဟော်မုန်းအဆင့်ကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး စိတ်ဖိစီး မှုလျော့ကျကာ အမျိုးသား စွမ်းဆောင်ရည် တိုးစေပါတယ်။
သင့်ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းမွန်စေမယ့် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်နည်း တစ်ခုက နှလုံးသွေးကြော ကျန်းမာအောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်း မှန်ပြီး သက်လုံကောင်းစေပါတယ်။ အပြေးလေ့ကျင့်တာ၊ ရေကူးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာစတဲ့ ချွေးထွက်စေမယ့်
လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ မိနစ် ၃၀ ခန့် ပြုလုပ်ပေးရင် အမျိုးသား စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။
Tip! လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကြောင့် ဝမ်းဗိုက်အဆီ လျော့ကျသွားတာဟာ အမျိုးသား စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုကောင်းမွန်စေတဲ့ အချက်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုဟာ လိင်စိတ်အပါအဝင် အထွေထွေ ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်နှလုံးခုန်နှုန်း တိုးတာနဲ့ သွေးတိုးတာတို့ ဖြစ်စေပြီး ဒီအချက် နှစ်ခုစလုံးဟာ လိင်ဆန္ဒနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့ အရက်အလွန်အမင်း သောက်တာတို့ ဖြစ်စေသလို ဒီအကျင့် ဆိုး နှစ်ခုစလုံးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
နေခြည်နုနုဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မယ်လတိုနင် ဟော်မုန်းထွက်နှုန်း နှေးစေပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းက အိပ်မောကျစေတာကြောင့် လိင်ဆန္ဒ လျော့ကျစေပါတယ်။ မယ်လတိုနင် နည်းပြီး လန်းဆန်းနေမှသာ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်မှာ ဖြစ်လို့ အပြင်ထွက်ပြီး နေခြည်နုနု ခံယူပေးပါ။ အထူးသဖြင့် အုံ့မှိုင်းတဲ့ ရာသီတွေမှာ အပြင်ထွက်ကာ နေခြည်နုနု ခံယူပေးသင့်ပါတယ်။
သင့်အိမ် ထောင်ဖက်ကို ဂရုစိုက်ပါ
အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို အလေးထားမှသာ သင်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ အိမ်ထောင်မှု သုခအပြည့်အဝ ရရှိမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကိုလည်း ကြင်ကြင်နာနာ ဂရုစိုက် ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အမြိုးသားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပိုမို ကောငျးမှနျလာအောငျ ပံ့ပိုးပေးနိုငျမယျ့ ဆေးဝါးမြိုးစုံ ရှိနပေမေယျ့ ဆေးတှကေို မမှီဝဲခငျြဘူးဆိုရငျ သဘာဝနညျးနဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ကောငျးမှနျလာစမေယျ့
အောကျပါ နညျးလမျးတှကေို လိုကျနာ ပေးသငျ့ပါတယျ။ အမြိုးသားစှမျးဆောငျရညျ ကောငျးစမေညျ့ အာဟာရ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာနဲ့အတူ လိငျတံဆီကို သှေးစီးဆငျးမှု ကောငျးစမေယျ့ အစားအစာတခြို့ကို တှဲဖကျစားပေးပါ။ အဲဒီအစာတှကေတော့-
ကွကျသှနျဖွူနှငျ့ ကွကျသှနျနီ - ခံတှငျး အနံ့အတှကျ သိပျမကောငျးလှပမေယျ့ သှေးလှညျ့ပတျမှု စနဈအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အစာနှဈမြိုးပါ။
ငှကျပြောသီး - ပိုတကျစီယမျမြားစှာပါတဲ့ ငှကျပြောသီးဟာ သှေးဖိအားကို ကစြပွေီး လိငျမှုဆိုငျရာ အစိတျအပိုငျးတှရေဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ငရုတျသီးနှငျ့ ငရုတျကောငျး - သဘာဝ ဟငျးခတျ အမှေးအကွိုငျတှဟော သှေးတိုးနဲ့ ရောငျရမျးမှု လြော့ ကစြကော သှေးလှညျ့ပတျ စီးဆငျးမှုကို ကောငျးစပေါတယျ။
အမြိုးသားစှမျးဆောငျရညျ ကောငျးမှနျစမေညျ့ ဖွညျ့စှကျဓာတျမြား
အမြိုးသားအင်ျဂါ သနျစှမျးကနျြးမာအောငျ စှမျးဆောငျပေးမယျ့ ဖွညျ့စှကျဓာတျတှေ ရှိပါတယျ။
အိုမီဂါ ၃ ဖကျတီးအကျစဈ - ဆယျလျမှနျငါးနဲ့ တူနာငါးတှမှော တှရေ့သလို ထောပတျသီးနဲ့ သံလှငျဆီထဲ မှာပါတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဟာ သှေးစီးဆငျးမှုကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ဗီတာမငျ B1 - ဒီဗီတာမငျက နာ့ဗျကွောစနဈကို ပိုမွနျမွနျ လှုပျရှားစပွေီး ဦးနှောကျကနေ လိငျတံဆီကို အခကျြပွမှု မွနျဆနျစပေါတယျ။ ဒီဗီတာမငျ ပါဝငျတဲ့ အစာတှကေ အဆီနညျးတဲ့ ဝကျသား၊ မွပေဲနီ ပဲနီစေ့
ဥအမြိုးမြိုး - ဗီတာမငျဘီ အုပျစုမြားစှာပါတဲ့ ဥအမြိုးမြိုးဟာ ဟျောမုနျးအဆငျ့ကို ဟနျခကျြညီစပွေီး စိတျဖိစီး မှုလြော့ကကြာ အမြိုးသား စှမျးဆောငျရညျ တိုးစပေါတယျ။
သငျ့ကနျြးမာရေးကို ပိုကောငျးမှနျစမေယျ့ အကောငျးဆုံး လကေ့ငျြ့နညျး တဈခုက နှလုံးသှေးကွော ကနျြးမာအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာကွောငျ့ နှလုံးခုနျနှုနျး မှနျပွီး သကျလုံကောငျးစပေါတယျ။ အပွေးလကေ့ငျြ့တာ၊ ရကေူးတာ၊ လမျးလြှောကျတာစတဲ့ ခြှေးထှကျစမေယျ့
လကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနေ့ မိနဈ ၃၀ ခနျ့ ပွုလုပျပေးရငျ အမြိုးသား စှမျးဆောငျရညျကို ပိုကောငျးစပေါတယျ။
Tip! လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာကွောငျ့ ဝမျးဗိုကျအဆီ လြော့ကသြှားတာဟာ အမြိုးသား စှမျးဆောငျရညျကို ပိုကောငျးမှနျစတေဲ့ အခကျြပါ။
စိတျဖိစီးမှုဟာ လိငျစိတျအပါအဝငျ အထှထှေေ ကနျြးမာရေးကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့
နှလုံးခုနျနှုနျး တိုးတာနဲ့ သှေးတိုးတာတို့ ဖွဈစပွေီး ဒီအခကျြ နှဈခုစလုံးဟာ လိငျဆန်ဒနဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို
စိတျဖိစီးမှုကွောငျ့ ဆေးလိပျသောကျတာနဲ့ အရကျအလှနျအမငျး သောကျတာတို့ ဖွဈစသေလို ဒီအကငျြ့ ဆိုး နှဈခုစလုံးက လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးဆောငျရညျကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
နခွေညျနုနုဟာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ မယျလတိုနငျ ဟျောမုနျးထှကျနှုနျး နှေးစပေါတယျ။ ဒီဟျောမုနျးက အိပျမောကစြတောကွောငျ့ လိငျဆန်ဒ လြော့ကစြပေါတယျ။ မယျလတိုနငျ နညျးပွီး လနျးဆနျးနမှေသာ အမြိုးသားစှမျးဆောငျရညျ ကောငျးမှနျမှာ ဖွဈလို့ အပွငျထှကျပွီး နခွေညျနုနု ခံယူပေးပါ။ အထူးသဖွငျ့ အုံ့မှိုငျးတဲ့ ရာသီတှမှော အပွငျထှကျကာ နခွေညျနုနု ခံယူပေးသငျ့ပါတယျ။
အိမျထောငျဖကျရဲ့ စိတျဆန်ဒကို အလေးထားမှသာ သငျတို့ဇနီးမောငျနှံဟာ အိမျထောငျမှု သုခအပွညျ့အဝ ရရှိမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အိမျထောငျဖကျရဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ စိတျခမျြးသာမှုကိုလညျး ကွငျကွငျနာနာ ဂရုစိုကျ ဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။